လူသားအားလုံးအတွက်: နိဗ္ဗာန်ဆိုတာ ဆင်းရဲငြိမ်းခြင်းလား၊ ဘာမှ မရှိခြင်းလား
နိဗ္ဗာန်ဟာ ကောင်းကင်မှာ မရှိပါဘူး။ ဘယ်မှာမှ မရှိပါဘူး။ နိဗ္ဗာန်ဟာ အမှန် ရှိပါတယ်။ သို့သော်
ဘယ်မှာမှ မရှိပါဘူး။ နားထွေးသွားပါသလား။
ဆိုလိုတာက ဆင်းရဲမရှိခြင်းဆိုတဲ့ အငြိမ်းဓာတ်ကြီးဟာ တည်ရာဌာန မရှိပါဘူး။ ဒီ
သဘာဝကြီးဟာ အကြောင်း တစုံတရာကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ (သင်္ခတ)သဘာဝ မဟုတ်ပါဘူး။
ဒီနေရာမှာ သင်္ခတနဲ့ အသင်္ခတရဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကို သဘောမပေါက်သေးသူများအတွက် အနည်းအကျဉ်း ရှင်းပြဖို့
အဖြစ်တရားမဟုတ်တဲ့ ဒီ အသင်္ခတ သဘာဝဟာ မဖောက်မပြန် အမှန်တကယ် ရှိတဲ့ တရားဖြစ်လို့ မူလ သဘာဝ
အနေနဲ့ ရှိနေတဲ့ “အရှိပရမတ်”တရားပါ။ “အသင်္ခတပရမတ်”ပေါ့။
အဲဒီ အရှိတရားဟာ ဘာလဲဆိုတော့ သူဟာ သင်္ခတရဲ့ ပြောင်းပြန်သဘောဖြစ်လို့ သင်္ခတ ခေါ်တဲ့
ရုပ်နာမ်ငြိမ်းနေခြင်း၊ ရုပ်နာမ် မရှိခြင်း သဘောပါပဲ။
ဒီ ဆင်းရဲငြိမ်းနေတဲ့ ဆင်းရဲကင်းနေတဲ့ သဘာဝဟာ မူလကတည်းက ရှိနေတဲ့ အရှိသဘာဝမို့ သူဟာ
အကြောင်းကြောင့် ဖြစ်တာ မဟုတ်လို့ သူ့ကို အသင်္ခတလို့ ခေါ်ရပါတယ်။
ဒါကြောင့် အသင်္ခတနယ်လို့ ခေါ်တဲ့ နိဗ္ဗာန်ဟာ ဖြစ်ပျက်နယ်ကို လွန်မြောက်နေပြီဖြစ်လို့ ဆင်းရဲမရှိဘဲ
အသင်္ခတ ခေါ်တဲ့ အရှိတရားဟာ ဖြစ်ခြင်းပျက်ခြင်း မရှိလို့ ဆင်းရဲငြိမ်းတယ်။ ဒါကိုပဲ
နိဗ္ဗာနံ - နိဗ္ဗာန်ပေတည်း။” လို့ အဖြစ်တရားနဲ့ အရှိတရားကို ခွဲခြား
ဒီ ဆင်းရဲငြိမ်းတဲ့ သဘာဝ အရှိပရမတ်တရားဟာ တည်ရာ ဌာန မရှိလို့ ဘယ်နေရာမှာ ရှိတယ်လို့ ပြောမရသလို အဖြစ်တရား မဟုတ်လို့
ဘယ်အချိန် ဘယ်ကာလက ဖြစ်တယ်လို့လည်း ပြောလို့ မရပါဘူး။
ဒါကြောင့် အပတိဋ္ဌ = တည်ရာဌာန မရှိတဲ့ တရား၊ ကာလဝိမုတ္တ = အတိတ် အနာဂတ် ပစ္စုပ္ပန်ဆိုတဲ့
အချိန်ကာလမှ လွတ်တဲ့ တရားပါ။ ( Nibbanna is beyond time and space. )
လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟ၊ မာန၊ ဒိဋ္ဌိ စတဲ့ တရားတွေဟာ သတ္တဝါကို ပူလောင်စေတဲ့ တရား၊
ဆင်းရဲစေတဲ့ တရားတွေပါ။ ဒါကြောင့် သူတို့ကို ကိလေသာလို့ ခေါ်ပါတယ်။
ကိလေသာငြိမ်းသော်လည်း ရုပ်နဲ့နာမ်တချို့က ရှိနေသေးတော့ ဖြစ်ပျက်ဆင်းရဲ = သင်္ခါရဒုက္ခ
အဲဒီ ရုပ်နာမ်သင်္ခါရတွေ အဖြစ်ရပ်ပြီး နောက်ထပ် မဖြစ်တော့ဘဲ သင်္ခါရဒုက္ခပါ အပြီးသတ် ငြိမ်းမှပဲ သန္တိသုခ ခေါ်တဲ့ တကယ်
အငြိမ်းသဘာဝ နိဗ္ဗာန်ကြီးကို တွေ့ရပါတယ်။
သို့သော်လည်း မီးရှိနေတဲ့အခါမှာတော့ မီးမရှိဘဲ အေးနေတဲ့ သဘာဝကို မတွေ့နိုင်
အဲဒီအတိုင်းပဲ ဒီ ဆင်းရဲငြိမ်းတဲ့ သဘာဝ၊ ဆင်းရဲမရှိတဲ့ သဘာဝကြီးဟာ မူလကတည်းက ရှိနေတဲ့
တစ်ဘက်က ဆင်းရဲရှိနေသလို တခြားတစ်ဘက်ကလည်း ဆင်းရဲငြိမ်းတဲ့ ဆင်းရဲမရှိတဲ့ သဘာဝဟာ
သို့သော်လည်း ရုပ်နာမ်သင်္ခါရတွေ ဖြစ်နေခိုက်မှာတော့ ရုပ်ဆင်းရဲ နာမ်ဆင်းရဲ သင်္ခါရဆင်းရဲတွေက ဖုံးကွယ်ထားလို့ ဆင်းရဲမရှိတဲ့
သဘာဝကြီးကို မဆိုက်ရောက်နိုင် မသိနိုင်ဘဲ ဖြစ်နေတာပါ။
ဒီတော့ ရထားဆိုက်မှပဲ မန္တလေးမြို့ကြီး ဖြစ်ပေါ်လာသလားဆိုတော့ မဟုတ်ပါဘူး။
အများသိတဲ့အတိုင်းပဲ မန္တလေးမြို့ကြီးက အရင်ကတည်းက ရှိနေတာမဟုတ်လား။
အဲဒီအတိုင်းပဲ ဆင်းရဲမရှိတဲ့ သဘာဝကြီးဟာလည်း အကြောင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အဖြစ်တရား (သင်္ခတ) မဟုတ်။ မူလကတည်းက ရှိနေတဲ့
အရှိတရား (အသင်္ခတ)ပဲ။ မဂ္ဂင်ရှစ်ပါး ယာဉ်ရထားကို လမ်းဆုံးအောင်
စီးသွားနိုင်တဲ့ လူကတော့ လမ်းဆုံးရင် အသင်္ခတ သဘာဝ အငြိမ်းဓာတ်ကို
တကယ်လို့သာ နိဗ္ဗာန်ဟာ အကြောင်းတစုံတရာကြောင့် ဖြစ်တဲ့ သဘာဝဆိုရင် ပျက်ရတာ ဓမ္မတာဖြစ်လို့ နိဗ္ဗာန်ကိုလည်း ပျက်တယ်လို့
ဒါကြောင့် “ဓုဝံ = အမြဲရှိနေတဲ့ သဘော”လို့ ဆိုရပါတယ်။ ပြီးတော့ မဖြစ်တဲ့ သဘာဝမို့ သူ့ကို ဖြစ်ပေါ်အောင် လုပ်ပေးတဲ့
မဂ္ဂင်ရှစ်ပါး ကျင့်ကြံပွားများမှ ဆင်းရဲငြိမ်းတာဆိုတော့ မဂ္ဂင်ရှစ်ပါးဟာ ဆင်းရဲငြိမ်းခြင်း ဆိုတဲ့
နိဗ္ဗာန်ရဲ့ အကြောင်းတရားပေါ့လို့ စောဒကတက်စရာ ရှိပါတယ်။
ဒါကြောင့် မဂ္ဂင်ရှစ်ပါးဟာ နိဗ္ဗာန်ရဲ့ အကြောင်းတရားဆိုတာလည်း မှန်ပါတယ်။ သို့သော်လည်း
မဂ္ဂင်ရှစ်ပါး ပွားခြင်းက ဆင်းရဲငြိမ်းခြင်းကို ဖြစ်စေတာ မဟုတ်ပါဘူး။
မဂ္ဂင်ရှစ်ပါး ပွားခြင်းကြောင့် ဆင်းရဲငြိမ်းတဲ့ ဆင်းရဲမရှိတဲ့ သဘာဝကို
ဝိသုဒ္ဓိမဂ် (ဒု၊ ၁၄၀)မှာ “ပတ္တဗ္ဗမေဝ ဟေတံ မဂ္ဂေန၊ န ဥပ္ပါဒေတဗ္ဗံ = ဤ နိဗ္ဗာန်ကို မဂ်သည်
ရောက်အပ်သည်သာလျှင် ဖြစ်၏။ ဖြစ်စေအပ်သည်ကား မဟုတ်ပေ။”လို့
ဆင်းရဲ မရှိဘဲ ဆင်းရဲငြိမ်းနေတဲ့ သဘာဝကြီးဟာ အရှိတရား ဖြစ်သော်လည်းပဲ အဲဒီ ဆင်းရဲငြိမ်းတဲ့ သဘာဝကို ရဖို့ ဆိုက်ရောက်ဖို့ကတော့
ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ရုပ်နာမ် ခန္ဓာ ဆင်းရဲ ငြိမ်းမှပဲ ရနိုင်
အဲဒီအတိုင်းပဲ ရုပ်နာမ်ခန္ဓာ ဆင်းရဲကို မလိုချင်ရင် အဲဒီ ဆင်းရဲရဲ့အကြောင်းကို
မှန်ပါတယ်။ တစုံတရာကို လိုချင်ရင် ဆင်းရဲတော့တာပဲ။ ငွေလိုချင်ရင်
ငွေလိုချင်စိတ်ကြောင့် ဆင်းရဲတယ်။ ကားလိုချင်ရင် ကားလိုချင်စိတ်ကြောင့်
ဆင်းရဲတယ်။ အဝတ်အစား တစုံတခုကို တပ်မက်ရင်လည်း အဲဒီ တပ်မက်စိတ်ကြောင့်
ဆင်းရဲတယ်။ သူဌေးသူကြွယ်စတဲ့ ဘဝကောင်း ဘဝမွန်တွေကို လိုချင်ရင်လည်း
ဒါကြောင့် ရုပ်နာမ်ခန္ဓာဆင်းရဲ ငြိမ်းချင်ရင် အကြောင်းဖြစ်တဲ့ လိုချင် တပ်မက် နှစ်သက် တွယ်တာမှု တဏှာလောဘကို ပယ်သတ်မှပဲ
ဆင်းရဲများတယ်။ သို့သော် သင်္ခါရဒုက္ခဆိုတဲ့ ဖြစ်ပျက်ဆင်းရဲအနေနဲ့ ဆိုရင်တော့ ဆင်းရဲချည်းပဲ။
ကျန်တဲ့ ဒုက္ခဒုက္ခ၊ ဝိပရိဏာမဒုက္ခ ဆိုတာတွေနဲ့ တွက်လို့ရှိရင်တော့ ဆင်းရဲများတယ်။
ဒီတော့ ဆင်းရဲများပြီးတော့ ချမ်းသာနည်းပါလျက်နဲ့ သတ္တဝါဟာ ဘဝတစ်ခု ဖြစ်ပြီးတော့
ရှင်ချင်တယ်ဆိုတာ ရုပ်နဲ့နာမ် နှစ်ခုတွဲပြီးတော့ အဆက်မပြတ် ဖြစ်ပျက် ဖြစ်ပျက် အစဉ်အတိုင်း
ဖြစ်နေတာ ပြောတာ မဟုတ်လား။
အဲဒီတော့ ရှင်ချင်တယ်ဆိုတာ ရုပ်နာမ်နှစ်ခု ဆက်ပြီးတော့ ဖြစ်ပျက်နေတာကို ဆိုလိုတာ
“အမယ်လေး ... ဆရာတော်၊ မကြာခင်က ၁၀-တန်း စာမေးပွဲကျကြတုန်းကလေ သေချင်တဲ့လူတွေ အများကြီး ဘုရား။ တပည့်တော်တို့
ဒီတော့ တစုံတခုသော အဆင်မပြေမှုကြောင့် သေချင်တယ်ဆိုတဲ့ အဲဒီလူတွေ တကယ် သေချင်သလားဆိုတော့ အဲဒီဆင်းရဲနဲ့ တွေ့တဲ့
ကြုံတဲ့ အခိုက်မှာတော့ သေချင်ပါလိမ့်မယ်။
ဒါပေမယ့် ‘ဒီလိုဆိုရင် ကြိုးဆွဲချ သေမယ်’ဆိုပြီး ကြိုးကွင်းစွပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ ဘယ့်နှယ် ... သူ
အသက်ရှင်ချင်စိတ်ကြောင့် ရှင်ရတယ်ဆိုတာ အဲဒါကိုပဲ စကားလုံးထွားထွားနဲ့ ပြောရရင် “ဘဝတဏှာကြောင့် ဘဝတစ်ခု
ဒီတော့ အဲဒီရှင်ချင်စိတ်ဟာ သမုဒယသစ္စာ။ ဟိုဘက်မှာ ဘဝအသစ် ရုပ်အသစ် နာမ်အသစ်
ဖြစ်ပြီးတော့ ဆင်းရဲတွေ တွေ့နေတာဟာ ဘာတွေလဲ။
ဒီတော့ လိုချင် တပ်မက် နှစ်သက် တွယ်တာခြင်းရဲ့ အကြောင်းတရားက ဘာလဲဆိုတော့
ဒါတွေကို ဆင်းရဲလို့ အမှန်အတိုင်း မသိတဲ့ အဝိဇ္ဇာပဲ မဟုတ်လား။
“အဲဒီ ရုပ်တရား နာမ်တရားတွေ ဖြစ်နေတာဟာ ဆင်းရဲပဲ”လို့ အမှန်အတိုင်း မသိတာ။ အဲဒါကို ‘အဝိဇ္ဇာ’လို့လည်း ခေါ်တယ်။ ‘မောဟ’လို့လည်း
တစ်ခါ အဲဒီ ဘဝမှာလည်းပဲ ကားလိုချင်လို့ ကားဝယ်ဖို့ ငွေရှာရ၊ ကားရှာရနဲ့ ဆင်းရဲတွေ
သူ့ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်တဲ့ ဆင်းရဲမှန်သမျှ ရုပ်ဒုက္ခ နာမ်ဒုက္ခ အပါအဝင် လောကမှာ တွေ့ရတဲ့
ဒုက္ခမှန်သမျှဟာ ဒုက္ခသစ္စာ = ဆင်းရဲအမှန်တွေပဲ။
ဟောဒီ ပရိသတ်မှာ ကျောင်းရှိသလား။ ကျောင်းဆိုတာ ဘုန်းကြီးကျောင်းပြောတာ။
မရှိရင် ငါ့ကျောင်းမှာ မိုးတွေများ စိုနေမလားဟဲ့၊ မိုးကလည်း ရွာတော့မယ်။ အဲဒီ
အဲဒီလို ကျောင်းပေါ်မှာ တွယ်တာ တပ်မက်တဲ့ တဏှာငြိမ်းတော့ ကျောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့
ဒီတော့ တရားကျင့်ကြံ ပွားများ အားထုတ်လို့မို့ ရုပ်နဲ့နာမ်ကို သတိဦးစီးတဲ့ စိတ်နဲ့ မပြတ် ရှုလို့ ရုပ်နာမ်ရဲ့
သဘာဝအမှန်ကို သိပြီး အနိစ္စ၊ ဒုက္ခ၊ အနတ္တ လက္ခဏာတွေ သိမြင်တဲ့အခါ
ဝိပဿနာဉာဏ်တွေ တဆင့်ထက် တဆင့် တက်သွားပြီး သောတာပတ္တိမဂ်ဉာဏ်ဖိုလ်ဉာဏ်
ရတော့ ဒိဋ္ဌိနဲ့ ဝိစိကိစ္ဆာ ကိလေသာ ငြိမ်းတယ်။
အဲဒီ ငြိမ်းတဲ့ ကိလေသာထဲမှာ အခုနက ပြောခဲ့တဲ့ မသိမှု အဝိဇ္ဇာရော၊ တပ်မက်မှု တဏှာရော
ရှေ့ဆုံးက ပါတယ်။ မပါပေဘူးလား။
ငြိမ်းနိုင်တာကို ကျောင်းသူကျောင်းသား ဆရာ ဆရာမတွေမှာ ဘုန်းကြီးကျောင်းကို တပ်မက်တဲ့ တဏှာမရှိလို့ တဏှာငြိမ်းတာ သာဓက ပြခဲ့တယ်။
ဘုန်းကြီးမှာ သားသမီးကို တပ်မက်တဲ့ တဏှာငြိမ်းတာကို သာဓက ပြခဲ့တယ်။
တဏှာဆိုတာ ငြိမ်းနိုင်တယ်။ ငြိမ်းအောင် လုပ်လို့ရှိရင် ငြိမ်းနိုင်တယ်။
ဒီမှာလည်းပဲ အရဟတ္တမဂ်ဉာဏ်နဲ့ အရိယသစ္စာကို အမှန်အတိုင်း သိမြင်တဲ့အခါကျတော့ ဘာကိလေသာ ဘာအဝိဇ္ဇာ ဘာတဏှာမှ မရှိတော့ဘူး။
ကိလေသာအားလုံး အမြစ်မကျန် (အနုသယပါ) ငြိမ်းကုန်ကြတယ်။ ဒိဋ္ဌိလည်း
မရှိတော့ဘူး။ ကိလေသာတွေ အကုန်လုံး ငြိမ်းသွားကြပြီ။
ဒီတော့ ဆင်းရဲရဲ့ အကြောင်းဖြစ်တဲ့ တွယ်တာ တပ်မက်မှု တဏှာငြိမ်းတဲ့ အခါကျတော့ ဒီ
ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်မှာ ဘာဆင်းရဲ ရှိဦးမလဲ။
ဒါကြောင့် အဲဒီ ရဟန္တာရတဲ့ အာရုံပြုတဲ့ ဆင်းရဲငြိမ်းမှုသဘော = နိဗ္ဗာန်ကို ရုပ်နာမ်ခန္ဓာ
အကြွင်းအကျန်ရှိတဲ့ နိဗ္ဗာန် = သဥပါဒိသေသနိဗ္ဗာန် လို့ ခေါ်တယ်။ အဲဒါဟာ
ဒီဘဝတင်ပဲ ရနိုင်တဲ့ နိဗ္ဗာန်ပဲ။
အဲဒီ ရဟန္တာ ပရိနိဗ္ဗာန် စံပြီးတဲ့အခါကျတော့ ရှင်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ တဏှာ မရှိတော့တဲ့အတွက် နောက်ဘဝမှာ
အသက်ရှင်မှုဆိုတဲ့ ရုပ်သစ်နာမ်သစ် ပြန်ဖြစ်ဦးမလား။
အဲဒါကို အနုပါဒိသေသနိဗ္ဗာန် လို့ ခေါ်တယ်။ ရုပ်နာမ်ခန္ဓာ အကြွင်းအကျန် မရှိတော့ဘဲ
လုံးဝ ငြိမ်းသွားတဲ့ နိဗ္ဗာန်ပဲ။
ဆိုကြပါစို့။ ဒီမှာ မီးတောက်နေတယ်။ မီးပုံကြီး မီးတောက်နေတဲ့အခါကျတော့ “ဟဲ့ ... မီးတွေ တောက်နေတယ်။
ငြိမ်းလိုက်စမ်း”လို့ ခိုင်းတော့၊ ငြိမ်းပစ်လိုက်တယ်။ ဘာရှိသေးသလဲ။
အဲဒီအတိုင်းပဲ ရုပ်ဒုက္ခ နာမ်ဒုက္ခ သင်္ခါရဒုက္ခပါ မရှိတဲ့အခါကျတော့ အဲဒီ သင်္ခါရဒုက္ခ သင်္ခါရဆင်းရဲပါ ငြိမ်းနေတဲ့ သဘာဝကြီး
ရှိနေတယ်။ အဲဒါကို နိဗ္ဗာန်ခေါ်တယ်။
ရဟန္တာ ပရိနိဗ္ဗာန် စံတဲ့အခါ ရုပ်နာမ်ခန္ဓာ အားလုံး အဖြစ်ရပ်သွားတာနဲ့ နောက်ထပ် ရုပ်နာမ်အသစ်
မဖြစ်ပေါ်တော့ဘဲ အဲဒီ ဆင်းရဲငြိမ်းတဲ့ မူလ သဘာဝကြီးကို ဆိုက်ရောက်သွားတာပဲ။
အဲဒါ အနုပါဒိသေသနိဗ္ဗာန်ပဲ။ အဲဒါဟာ နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာပါပဲ။
လောကီစည်းစိမ်ချမ်းသာလို ခံစားရတဲ့ ချမ်းသာတော့ မဟုတ်ဘူး။
ဆင်းရဲငြိမ်းနေလို့ ဆင်းရဲမရှိလို့ ချမ်းသာလို့ ခေါ်ရတဲ့ သန္တိသုခ =
ငြိမ်းအေးချမ်းသာပဲ။ ခံစားရတဲ့ ချမ်းသာ မဟုတ်ဘူး။
ချမ်းသာ ခံစားရရင် မကြာခင် ဆင်းရဲက ပေါ်လာဦးမှာပဲ။ ပြီးတော့ ခံစားရတဲ့ ချမ်းသာ =
ဝေဒယိတသုခဟာ ဖြစ်မှုပျက်မှု ရှိနေတော့ ချမ်းသာစစ် မဟုတ်ဘူး။ သင်္ခါရဒုက္ခပဲ။
ဒါကြောင့် ဆင်းရဲ လုံးဝ ငြိမ်းနေတဲ့ သန္တိသုခ = ငြိမ်းအေးခြင်း ချမ်းသာမှသာ
ဒီတော့ “ဒီလိုဆိုရင် ဘုရား၊ ဘာမှ မရှိတာကြီး လို့ တပည့်တော်တို့ မြင်နေပါတယ်။ မလိုချင်ပါဘူး”လို့များ စိတ်ထဲမှာ
ဖြစ်မိရင် ဒီလို စဉ်းစားကြည့်ပါ။
လူတစ်ယောက် ကင်ဆာရောဂါ ဖြစ်နေတယ်။ အော်ဟစ် ညည်းညူနေရတယ်။ ဝေဒနာက သိပ် ပြင်းထန်နေတယ်။ ဆရာဝန်တွေလည်း
ကုပါရဲ့။ ဓာတ်လည်း ကင်ပါရဲ့။ ဒါပေမယ့် ရောဂါဝေဒနာက ပြင်းထန်တော့
မသက်သာဘူး။ တအော်အော် တအင်အင်နဲ့ နေရတယ်။ နေ့လည်း အော်၊ ညလည်း အော်နဲ့။
အဲဒါ ဆင်းရဲလား၊ ချမ်းသာလား။
ဒါဖြင့် အဲဒီ ဆင်းရဲငြိမ်းအောင် ဘယ်လို လုပ်မလဲ။ အခက်သားပဲ နော်။ ဘုန်းကြီး Newsweek မဂ္ဂဇင်းထဲမှာ
တွေ့တယ်။ အနောက်နိုင်ငံများမှာတော့ ကင်ဆာရောဂါ ပျောက်တဲ့ နှုန်းဟာ အားရစရာ
ကောင်းလောက်အောင် တိုးတက်လာပါပြီတဲ့။ အဲဒါ သုတေသနတွေရဲ့
ဆေးကောင်းဝါးကောင်းတွေကြောင့် တိုးတက်လာပါပြီတဲ့။ ဒါကြောင့် အခု
ကင်ဆာရောဂါဟာ စောစောသိရင် ပျောက်နိုင်ပြီတဲ့။
ဒါပေမယ့် အခု ဒီလူမမာကတော့ ဝေဒနာ အင်မတန် ပြင်းထန်နေလို့မို့ အလွန့်ကို နာနေ
ကိုက်နေတယ်။ ကိုင်း ညလည်း မအိပ်ရ၊ နေ့လည်း မအိပ်ရနဲ့ အအိပ်ကလည်း ပျက်။
နာတာ ကျင်တာကလည်း ပြင်းထန်နဲ့။ ဆင်းရဲလိုက်တာ လွန်ရော။ ငါ့နှယ် သေတာ
ကောင်းပါရဲ့လို့ ခဏခဏ သေပစ်လိုက်ချင်စိတ် ပေါ်နေတယ်။
ဒီတော့ ဆရာဝန်က ကဲလေ ဒီလောက်တောင်မှ ခံစားနေရတာ ဒီနေ့ညတော့ ချမ်းသာရစေမယ်ပေါ့
ဆိုပြီးတော့ ကုပေးလိုက်တယ်။ ဘယ်လို ကုပေးသလဲဆိုရင် အားကောင်းတဲ့ အိပ်ဆေး
ထိုးပေးလိုက်တယ်။ အိပ်ဆေးထိုးပြီးလို့ နာရီဝက်လောက် ကြာတော့
ည ၁၀ နာရီလောက်ကနေ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်ကြီး အိပ်လိုက်တာ နံနက် ၈ နာရီလောက်ကျမှ နိုးတယ်။ အဲဒီ အိပ်ပျော်နေတုန်းမှာ သူ
နံနက် ၈ နာရီမှာ နိုးလည်း လာရော၊ နိုးလာတာနဲ့ တပြိုင်နက်တည်း အနာက နာလာတာပဲ။ အမေရယ် အဘရယ်နဲ့ အော်နေရတယ်။
ကိုင်း စဉ်းစားကြည့်။ အဲဒီ ဆင်းရဲနေတဲ့ လူမမာ တောက်လျှောက်ကြီး သိလျက် ဆင်းရဲနေတာကို သူ ကြိုက်မလား။ ဒါမှ မဟုတ်
ခံစားမှု မရှိဘဲ ဆင်းရဲငြိမ်းနေတာကို သူကြိုက်မလား။
ခုနက အနုပါဒိသေသနိဗ္ဗာန်ဆိုတာ အဲဒါမျိုးပဲ။ ခံစားမှု မရှိဘဲ ဆင်းရဲခပ်သိမ်း
အပြီးသတ် ငြိမ်းနေတဲ့ သဘောပဲ။ ဆင်းရဲငြိမ်းတော့ ချမ်းသာရနေတာပေါ့။ ခံတော့
မခံစားရဘူး။ ဝေဒယိတသုခ = ခံစားရတဲ့ ချမ်းသာ မရှိဘူး။ သန္တိသုခ =
အဲဒီတော့ ရုပ်နဲ့နာမ် ခန္ဓာကိုယ်နဲ့စိတ် နှစ်ခုရှိတဲ့အနက်က နာမ်ထဲက ဆင်းရဲကို ဖြစ်စေတဲ့ အဝိဇ္ဇာ
တဏှာ အစရှိတဲ့ ကိလေသာတွေ ငြိမ်းသွားရင်ပဲ မချမ်းသာဘူးလား။
ဒီတော့ အဲဒီ ကိလေသာငြိမ်းလို့မို့ ဆင်းရဲငြိမ်းတာဟာ ကောင်းကင်မှာ ရှိတာလား။
မြေကြီးထဲမှာ ရှိတာလား။ ဗြဟ္မာ့ဘုံမှာလား၊ နတ်ဘုံမှာလား။ ကိုင်း ဘယ်မှာ
မြတ်စွာဘုရား၊ တပည့်တော်ဟာ ရှေးဘဝတစ်ခုမှာ အလွန်တန်ခိုးကြီးတဲ့ ရသေ့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွမ်းကျင်တဲ့
လေးသမား ပစ်လွှတ်လိုက်တဲ့ မြားတစ်စင်း ထန်းပင်ရိပ်တစ်ခုကို
ကျော်လွန်တဲ့အချိန်နှင့် တပည့်တော် စကြာဝဠာတစ်ခု ဖြတ်ကျော်တဲ့အချိန်
ညီမျှသည်အထိ လျင်မြန်လှတဲ့ အဟုန် ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီလောက် တပည့်တော် အသွား
အဲဒီလောက် အသွားလျင်မြန်လှတဲ့ တပည့်တော်ဟာ စကြာဝဠာအနန္တရှိတဲ့ လောကကြီးရဲ့ အဆုံးကို ရောက်ချင်တဲ့အတွက် ဆွမ်းခံချိန်၊
စားချိန်၊ သောက်ချိန်၊ အနည်းငယ်မျှဖြစ်တဲ့ အနားယူချိန်၊ တပိုတပါး
သွားချိန်မှတပါး အချိန်ပြည့် နှစ်ပေါင်းတစ်ရာလုံးလုံး အဲဒီလောက်
လျင်မြန်တဲ့ အဟုန်နဲ့ လောကကြီးရဲ့ အဆုံးကို သွားခဲ့ဖူးပါတယ်။ သို့သော်လည်း
လောကကြီးရဲ့ အဆုံးကို မရောက်မီ လမ်းမှာပဲ သေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
ဒီတော့ မြတ်စွာဘုရားက မအိုမနာ မသေရာဖြစ်တဲ့ လောကရဲ့ အဆုံးကို သွားခြင်းဖြင့် မရောက်နိုင်ကြောင်း မိန့်တော်မူပြီးတော့
ခု ရွတ်ပြခဲ့တဲ့ ရောဟိတဿသုတ်မှာ မြတ်စွာဘုရား မိန့်ကြားတော်မူတာက စိတ်ရှိတဲ့
တစ်လံမျှလောက်သော ခန္ဓာကိုယ်မှာပဲ လောကကို ငါဘုရား ဟောတော်မူတယ်တဲ့။
အခု ပြောခဲ့တဲ့ ရောဟိတဿသုတ်မှာ လောကဆိုတာ ရုပ်နဲ့နာမ်ပါပဲ။ အဲဒီ ရုပ်နဲ့နာမ်ဟာ ဒုက္ခသစ္စာတရားပါပဲ။ ဒီတော့ လောကဆိုတာ
ဒုက္ခကိုပဲ ရှင်တော်မြတ်ဘုရား မိန့်ကြားတော်မူတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့
ဒီဒေသနာတော်အရ ဒုက္ခ၊ သမုဒယ၊ နိရောဓ၊ မဂ္ဂ ဆိုတဲ့ သစ္စာလေးပါးဟာ ခန္ဓာကိုယ်မှာ
မဂ္ဂသစ္စာကတော့ ဝိပဿနာရှုဆဲ ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့ ခန္ဓာမှာ ပုဗ္ဗဘာဂမဂ် ရှိပြီး
အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့ မဂ်ဖိုလ်အခိုက်မှာ အရိယမဂ် ရှိပါတယ်။
မြတ်စွာဘုရားကတော့ ယထာလာဘ = ရသင့်သလို ယူဖို့ရာ ပေါင်းပြီး
နိရောဓသစ္စာ = ဆင်းရဲငြိမ်းခြင်း အမှန်တရား = နိဗ္ဗာန်။ ဒီသစ္စာလည်း တစ်လံမျှလောက်သော ခန္ဓာကိုယ်မှာ
ရှိတယ်လို့ ဟောတော်မူတော့ နိဗ္ဗာန်ရဲ့ တည်ရာဟာ ခန္ဓာကိုယ်ပဲလို့ ဆိုရာ
လောင်နေတဲ့ မီး ငြိမ်းသွားတဲ့အခါ “မီးဘယ်မှာ ငြိမ်းသလဲ”လို့ မေးရင် “ဟိုမျာ ငြိမ်းတယ်”လို့ မီးလောင်ပြီးရာ နေရာကို
လက်ညှိုးထိုးပြ ရသော်လည်း တကယ်တော့ မီးငြိမ်းသွားမှုကို မြင်ရ တွေ့ရတာ
မီးငြိမ်းတယ်ဆိုတာ မကြာမီကလေးက ရှိနေတဲ့ မီး၊ အခု မရှိဘဲ ဖြစ်သွားတာကိုပဲ ငြိမ်းတယ်လို့
ပြောကြရတာဖြစ်တော့ မီးငြိမ်းတာကို ပြောချင်ရင် မကြာမီက မီးရှိခဲ့တဲ့
နေရာကိုပဲ မီးငြိမ်းတဲ့ နေရာလို့ တင်စား ပြောကြရပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဆင်းရဲငြိမ်းခြင်းဆိုတဲ့ နိဗ္ဗာန်ကို ဆင်းရဲမငြိမ်းမီက ရှိနေတဲ့
ရုပ်နာမ်ခန္ဓာမှာ ရှိတယ်လို့ တင်စားပြီး မြတ်စွာဘုရား ဟောတော်မူတာ
နိဗ္ဗာန်ဟာ တည်နေရာ တိုင်းကြီး ပြည်ကြီး မဟုတ်ပါဘူး။ ရွှေပြည်တော်ကြီးဟာ ရောက်ချင်
နေချင်စရာ သာယာစည်ကားသလို နိဗ္ဗာန = အငြိမ်းဓာတ်ကြီးဟာလည်း ဆင်းရဲ လုံးဝ
မရှိလို့ ရချင် ရောက်ချင်စရာ မျက်မှောက်ပြုချင်စရာ ကောင်းလှကြောင်း
အတူပြုပြီး တင်စား သုံးနှုန်းတာပါပဲ။ သဒိသူပစာ လို့ ခေါ်ပါတယ်။
မဟာယာနဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ ဂိုဏ်းခွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့ သုခဝတီဗျူဟာဂိုဏ်းကတော့ အနောက်ဘက် ကောင်းကင်မှာ
အလွန်သာယာလှတဲ့ နိဗ္ဗာန်ရွှေပြည်ကြီး ရှိတယ်လို့ ယူဆပါတယ်။
နောက်တစ်ခုက လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၅-နှစ်လောက်က အငြိမ်းစား တရားလွှတ်တော်ချုပ်
တရားသူကြီးတစ်ယောက်က ဘုန်းကြီးကို မေးဖူးတာ ရှိပါတယ်။
သူက ရှေးဆရာတော်ကြီးများ ပြုစုတော်မူကြတဲ့ ကျမ်းဂန်တွေမှာ သင်္ခတဓာတ်မှ
အသင်္ခတဓာတ်သို့ ရောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကို ဖတ်ရ မှတ်ရပါတယ်။
နိဗ္ဗာန်ဟာ အသင်္ခတဓာတ်ဆိုတော့ ပထဝီစတဲ့ ဓာတ်ကြီးများလို ရုပ်ဓာတ်ပါလား။ ဒါမှမဟုတ်
ဝိညာဏဓာတ်လို နာမ်ဓာတ်ပါလားလို့ မေးပါတယ်။
(ဤနေရာ၌ ‘နာမ်ဓာတ်လည်း မဟုတ်ဘူး’ဆိုသည်မှာ ‘စိတ်, စေတသိက်တို့ကဲ့သို့ အာရုံသို့
ညွတ်တတ်သော နာမ်မဟုတ်’ဟု ဆိုလိုပါသည်။ ‘မိမိသို့ အာရမ္မဏိကတရားတို့ကို
ညွတ်စေတတ်သောကြောင့် နာမ်မည်၏’ဟူသော ဝစနတ္ထအရမူ နိဗ္ဗာန်ကို နာမ်တရား၌
ဒါကြောင့် အသင်္ခတဓာတ်ဆိုတာ အသင်္ခတ သဘာဝ = အကြောင်းကြောင့် ဖြစ်တာ မဟုတ်ဘဲ မူလကတည်းက
ရှိနေတဲ့ အရှိသဘာဝတရားလို့ ဆိုလိုတာပါပဲ။
Posted by မိုးယံ at 1:27 PM Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
“နိဗ္ဗာန်ဆိုတာ ဆင်းရဲငြိမ်းခြင်းကို ခေါ်ပါတယ်။ ဘာမှ မရှိတာကို နိဗ္ဗာန်လို့
သာဓု(၃) ကိုမိုးယံ.... ကော်ပီကူးသွားတယ်.. သူများတွေကိုဖော်ဝပ်မယ်... ဖတ်ရတာ ကြက်သီးထတယ်
နိဗ္ဗာန်အကြောင်း စုံစုံစေ့စေ့ သိချင်မလား မသိဘူး
လင့်လေးနဲ့ ဒါနပြုလိုက်တယ် ငမိုးရေ
အချိန်မရတာကြောင့် ဖတ်နိုင်သလောက်လေးဖတ်သွား ပါတယ်. မျှဝေတာကျေးဇူးပါ။
ကိုမိုးယံရေ...စာတွေလည်းလေ့လာလိုက်ရတယ် ဒါပေမဲ့အကြိုက်ဆုံးပြောရရင် ဓါတ်ပုံလေးကိုပိုကြိုက်မိတယ်..ဖြူတခါမှမမြင်ဘူးတာလည်းပါမယ် ကြည်ညိုလွန်းလို့ ဒေါင်းလိုက်တယ် အကိုတော်